VaTsvangirai Vanoti Hurongwa hwaVaMugabe hweZvirango Hauneyi neMDC
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, vanoti chirongwa cheZanu PF chekunyorwa kwegwaro rekuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe nevamwe vavo, hachinei nebato ravo izvo zvapa kuti vasaenda kugungano rechirongwa ichi.
Vachitaura nevatori venhau muharare neChitatu, VaTsvangirai vati chirongwa ichi change chisiri chirongwa chehurumende.
VaTsvangirai vashora kumanikidzwa nekukokorodzwa kwaitwa vanhu neZanu PF vachiti zvaitwa izvi zvinotyorwa kodzero dzevanhu pamwe nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
Vati vakazvipira kuti zvirango zvibviswe vachiti ivo ndivo vakatotanga kutaura nedzimwe nyika kuti Zimbabwe ikwanise kudzyidzana nedzimwe nyika. Asi vati zvose izvi zviri kuvhiringwa nebato reZanu PF iro riri kuramba richishungurudza vanhu izvo zvakakonzera kuti itemerwe zvirango. Vati nyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa neZanu PF yakwirira zvikuru mukati memwedzi mishanu yapfuura. Vati nhengo dzebato ravo,kusanganisira nhengo dzeparamende nevanorwira kodzero dzevanhu, vari kusungwa vachipomerwa mhosva dzisina maturo.
Vatsvangirai vatiwo zviri pachena kuti mapurisa, masoja pamwe nevasori vari kushandiswa neZanu PF mukushungurudza vanhu.
Vati zvinhu zvinogona kuramba zvichishata munyika kana SADC neAfrican Union dzikasaona kuti GPA yatevedzwa uye kuti pave negwara rinobvumiranwa nemapato ese ari muhururmende kuti paitwe sarudzo dzakajeka.
Vayambira Zanu PF nekuramba ichimbunyikidza vanhu vachiti zviri kuituka kunyika dzakaita seLibya, Egypt nedzimwe, zvinokwanisa kuitika muZimbabwe kana vanha vakadzvanyirirwa kwenguva refu.
Pavabvunzwa nenyaya iri kugaro taurwa naVaMugabe yekuti makambani ekunyika dzakatemera VaMugabe nevamwe vavo zvirango zvehupfumi achatorwa, VaTsvangirai vati hurumende haina hurongwa hwakadaro uye vachada kuona kuti VaMugabe nebato ravo vachazvifambisa sei panyaya iyi.
Vati bato ravo rakazvipira kuona kuti GPA yatevedzwa kuitira kuti vanhu vemuZimbabwe vagare vakasununguka munyika yavo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti munyika hamuna kuyatsowirirana panyaya yekuti zvirango zvinonzi neZanu-PF zvakatemerwa nyika zviri kushanda here kana kuti kwete.
Vamwe vanoti mhere iri kuridzwa neZanu-PF inoratidza kuti zviri kushanda, asi vamwe vanoti Zanu-PF iri kuda kungobata vanhu kumeso.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vari mukuru wesangano reAfrica Reform Institute, VaTrevor Maisiri, vanoti zvirango hazvisi kushanda.